SIYAABAHA LAGU KEYDIYO DABACASAHA XILLIGA QABOOBAHA: TEKNOOLAJIYADA ILAALINTA GURYAHA EE LAGU SAMEEYEY DAMBASKA, JARAA'IDYADA, FILIMADA XAJMIGA, FEYLKA, WARGEYSYADA IYO KUWO KALE - KHUDRADDA
Kaydinta karootada xilliga qaboobaha waa arrin deg-deg ah, maaddaama khudraddan loo dulqaadanayo xilliga dayrta-qaboobaha aad u liita. Laakiin tani ma aha sabab loogu niyad jabo, maadaama ay jiraan tiro ku filan oo siyaabo wax ku ool ah.
Dhamaantood waa sahlan, la awoodi karo oo uma baahna waqti badan. On hababka ugu fiican ee ilaalinta khudradda this faa'iido leh, akhri maqaalka.
Isku-dhafka qaab-dhismeedka khudradda ee ilaalinta
Inta lagu jiro kaydinta ee beergooyska, geedi socodka xakamaynta. Nuxurkiisu waa qiiqa gaabis ah ee walxaha dabiiciga ah ee adag oo burburiya kuwa fudud. Nidaamkani wuxuu dhacaa marka la sii daayo tamarta. Inta lagu jiro neefsashada, ogsijiin ayaa la nuugay iyo carbon dioxide ayaa la sii daayaa.
Iyada oo ay ku badan tahay CO2 inta lagu jiro kaydinta muddada-dheer, tayada alaabtu sii xumaato iyo mararka qaarkood waxay keentaa in ay sii xumaato. Ku keydinta dalagyada xididka leh waxaa weheliya qoyaanka qoyaanka, qoyaan iyo qandho. Isbeddelka miisaanka midhaha ayaa sabab u ah uumiga qoyaanka. Dhididku wuxuu dhacaa marka khudradda dusha sare lagu shubo saqafka hoostiisa, ma bannaana meel bannaan. Qalabka kuleylka ee saqafka ayaa sidoo kale saameynaya qulqulka.
Waa maxay noocyada la kaydin karaa?
DAREEN: Loogu talagalay kaydinta muddada dheer ee dalagyada xididka ah, waa muhiim in la doorto noocyada kala duwan ee saxda ah.
Noocyada bilawga iyo xilliga badhkeed ee dhererkoodu yar yahay waxay liitaa qoyaan, sidaas darteed maaha mid ku habboon ilaalinta muddada dheer. Isticmaal iyaga ka hor bilawga cimilada qabow ama qasacadaysan.
Wixii ilaalinta muddada-dheer, dooran karootada goor dambe-Bisaylkiisa, dhererka miro aan ka yarayn 20 cm Waa:
Ku saabsan noocee ah ee dabacasaha ku habboon kaydinta muddada-dheer ee jiilaalka, akhriso maqaalkan.
Hababka xiisaha leh ee guriga
Sidee loo badbaadiyaa filimka cuntada?
Habkani wuxuu ka mid yahay kuwa ugu caansan iyo waxtar leh. Hannaanka:
Isu ururi dalagyada la goostay si fiican, xaji dushooda, qiimee xaaladda. Haddii karootada ay waxyeello gaarto, markaa waa la tuurayaa dhinaca.
Wixii qashin dheer oo xididdada ka mid ah noqon karaa pre-sprayed leh faleebo diirka basasha. Si aad tan u sameyso, qaado 100 garaam oo qalab ceeriin ah iyo 1 litir oo biyo ah. Ku adkeyso 5 maalmood.
In faleebo this, waxaad ku dari kartaa xididada 10 daqiiqo, ka dibna saaraan on maro qalalan si ay si fiican u qalalan.
Khudradda cagaaran ee dhirta ku jirta duubista cuntada 4 ilaa 5 jeer.
U hubso in dhammaan qaybaha ka mid ah karootiga lagu duuduubay oo aan la taaban karin khudradda ku dhasha.
Kaydinta karootada ee dambaska ayaa ku fiican in lagu keydiyo khudaarta dhulka hoostiisa. Hannaanka:
Isku dar bacda budada ah iyo budada dufcada ee saamiga 3: 1.
Ku rid isku dar ah weel alwaax ah.
Dhaqidda dalagyada, ka saar dushooda, qalalan, ku rid ash caaro leh oo qaro weyn oo foosto ah oo si khafiif ah ula saydhaa leh Halbeegga.
MUHIIM: Waxaa mahadnaqa niqiijiga, waxaa suurtagal ah in la joojiyo isku dhufashada bakteeriyada iyo ilaalinta casriga iyo dhadhanka dabacasaha muddo dheer.
Isticmaal baakooyinka vacuum
Qaabkan waxaad u baahan tahay inaad u diyaariso bacaha filimada leh karti 5-30 kg. Bacaha Bacda oo leh khudradda xididka ku kaydsan qolal qabow. Qoyaanka ku jira bacaha waa 96-98%, sidaas darteed dabacasaha ma dhajin doono. Iyo inta lagu jiro kaydinta khudaarta, waa inay furan yihiin.
Haddii ay xiranyihiin, carbon dioxide waxay isku ururin doontaa, diirada oo ay dhowr jeer ka badan tahay heerka oksijiinta. Sababtan awgeed, dabacasaha wey dhacaan. Waxaad ku kaydin kartaa bacaha xiran, laakiin markaa waa inaad ilaalisaa hawo-qaadashada. Just meelo dhawr ah. Nidaamka waa sida soo socota:
Ku dhaq oo qallaji dabacasaha (ku saabsan haddii la maydho karootada kahor intaan la dhigin kaydinta, waxaa lagu qoray faahfaahin halkan).
Ku rid boorsooyinka diyaarka ah (hal bac ku saabsan 5-6 karootada).
Si aad u xirto bacaha, waxaad isticmaali kartaa habkii hore loo xaqiijiyay - birta. Labada geesood ee bacda wada geli, korka wargeyska iyo ku soco adigoo leh birta kulul. Marka la eego saamiga heerkulka sare, cidhifyada bacda ayaa isku dhafan.
Sidoo kale, hawada ka soo bacda leh khudradda waxaa laga saari karaa nadiifiye qalab.
Baakadaha baakadeysan sanduuq kasta (caag ah ama alwaax) kuna dhig meel hoose ama dusha sare.
Inta lagu jiro kaydinta, kondhiyeyntu waxay ka sameysan kartaa dusha sare ee bacaha. Wuxuu ka hadlayaa qoyaanka sare ee qolka. Waxaad ka hortagi kartaa tan adigoo rushaynaya lime fluff meel u dhow bacaha dabacasaha. Waxay nuugi kartaa qoyaanka xad-dhaafka ah.
Kaydinta karootada ku jirta baakooyinka faleebada:
Caisson waa naqshad aan biyuhu ahayn. Si kale haddii loo dhigo, waa sanduuq u eg si aan dibadda loo dhigin si aan lahayn hawo dibadda ah. Tani waa hab weyn oo lagu keydiyo dabacasaha, taas oo ay tahay inaad u hoggaansamto tiro tallaabooyin ah:
Ku dhaq basbaas si taxadar leh oo ka saar meesha dhalada (sida loo jarayo dabacasaha loogu talagalay kaydinta halkan).
Qalbinta xididdada ee hooska, ka dibna si fiican u qalajin, ku rid bacaha bacaha (5-6 gogo ').
Diyaargarow si aad uhesho khudradda si aad u gashato qashinka isla maalintaas.
Sanduuqa laftiisa ayaa lagu dari karaa dabaqyada ama maqaarka hoos loogu dhigi karo.
In dukaanka khudradda
Dukaanka khudradda loo isticmaalo lagu keydiyo khudaarta cagaaran. Laakiin habkani wuxuu leeyahay hal minus - dabacasaha, kaas oo ku yaala dusha sare, qaacidada sababtoo ah qoyaan xad dhaaf ah. Laakiin si gebi ahaanba loo diido qoyaanku ma awoodi karo, sababtoo ah, waxay bilaabi doontaa in ay dillaacdo. Si loo kordhiyo kaydinta dabacasaha dukaanka khudradda, waa inaad raacdaa tilmaamahan fudud:
Si joogto ah (1-2 maalmood oo kasta), dukaanka khudradda waa in la duubaa.
Dabool sarajooga sare ee dabacasaha.
Si kor loogu qaado qoyaanka hawada waxaa la gelin karaa weel biyo ah.
Habkani waa midka ugu fudud uguna kalsoonaan karo. Dhammaan wixii loo baahan yahay, si markaa hore loo nadiifiyaa dabacasaha wargeyska. Hubi in khudradda cagaaran ay gebi ahaanba ku jirto warqad. Khudaarta Ready in ay ku ridaan sanduuqa oo u dhigo qol qabow (oo ku saabsan waxa heerkulka waa in qolka loogu talagalay kaydinta mudada dheer ee dabacasaha, sida ay wax u socdaan).
Waxaa jira hab aad u xiiso leh oo lagu keydiyo karootada taangiyada aluminium.. Haddii doorashadan xaddidan la doorto, nidaamku waa sida soo socota:
Si fiican u dhaq dabacasaha, xoqin dhalada, kuna jiif maro qallalan si aad u engegto.
Ku rid khudradda cagaaran ee taangiga ku yaal meel qumman, oo daboolka ku dabool tuwaal waraaq ah.
Xir daboolka taangiga oo ku rid weelka meel qabow, halkaasoo qoyaanka hawadu sareeyo.
TALO: Iyadoo habkan loo isticmaalo karootada lagu keydiyo waxay haysan doonaan muuqaalkooda asalka ah illaa iyo inta dalagga cusub la goosto.
Tiknoolajiyada ilaalinta ee Maqsin
Waxaad isticmaali kartaa hababka soo socda:
In sanduuq alwaax ah. Khudaarta caleemaha ku duuban sanduuq alwaax ah, oo leh dabool leh. Dabool oo ku rakib Maqaasi fogaan 10-15 cm derbiga. Xaqiiqada ah in darbiyadu ay noqon karaan qoyan, ka dibna qoyaanka sanduuqyada ma dhici doono. Laguma talin in la dhigo sanduuqyada dhulka, waxa ugu wanaagsan in la isticmaalo meel hoose. Hal sanduuq si aan ugu badneyn 20 kg oo karootada ah.
Xalka barafka. Ku darso jilciska biyaha ilaa xalka dareeraha ah ee maadada ah ee loo yaqaan 'homogeneous liquid solution', waa in khudradda cagaarka ah loo rogo xalka oo la qalajiyo. Ku rid nuqullada diyaarka ah ee sanduuqa ku jira kuna rakib qolka qabow. Chalk waxaa loo isticmaali karaa si kala duwan. Budada budada budada budada. On 10 kg ee dalagyada xididada 200 g oo nuurad ah ayaa tagi doona. Sababtoo ah guryaha alkaline ee foorida, faafinta sheybaarka ayaa joojiya.
Sida loo dhigo karootada Maqsin, halkan ka barto.
Sida loo seexdo?
Si loo ilaaliyo goosashada dabacasaha si loo isticmaalo qalabka loo buuxiyo.
Waxaanu liiska ugu caansan:
Onion Husk. Haddii aad isticmaasho walxadan, ka dibna waxaad u baahan tahay inaad u diyaariso tiro badan. Husk waxay qaadataa qoyaan xad dhaaf ah, waxay ka ilaalisaa dalagyada xididada laga bilaabo abuurista qiiqa iyo faafinta microflora pathogenic. Iska xajin khudaar kasta oo miro kasta ku daadi dusha sare, ka dibna dhig sanduuqda dabacasaha hoose.
Balka maqaarka. Phenol, oo ku jira cirbadaha, waxay ka ilaalisaa xididada koritaanka cudur iyo kallana. Ku rid dabacasaha sanduuq, iyaga ku dabooli dhadday, geli khudradda oo ku rusheeya kor. Ku rakib qolka hoose ee dhulka hoostiisa, laakiin ma aha dhulka, laakiin dhinaca taagan.
Sand. Dhulka dabaqa hoose si ay u qabato barkad qoto dheer oo ciid ah. Ku rid karootada oo isku xiri rusheeyo ciid. Qaybta xigta ee xididdada si ay u jiifiso mid hore ee qaabka baaritaanka. Kudar ciid ah mar kale oo sii wad sii wad siman ilaa dhererka haramka uu yahay 1 m. Ka hor intaadan dalbaynin ciidda, ka baddal, iyo waxay u fiicantahay in la qarxo ujeedooyinka jeermiska.
Kuwa doonaya macluumaadka ku saabsan kaydinta karootada, waxaan diyaarinnay qodobo kale:
Goorma ayay karootada laga saarayaa beerta loogu talagalay kaydinta jiilaalka?
Sida loo ilaaliyo dabacasaha xilliga jiilaalka?
Waxaa soo baxday in dabacasaha kaydinta ay si buuxda u fudud yihiin. Waxa ugu muhiimsan waa in la helo qaabka ugu fiican ee tan loo sameeyo. Halkan waxaa lagama maarmaan ah in lagu hogaamiyo shuruudaha noocyada kala duwan, heerka qoyaanka ee qotada, iyo sidoo kale muddada ay lagama maarmaan tahay in la ilaaliyo dalagga cusub iyo dhadhan fiican (wakhtiga kaydinta karootada, halkan ka akhriso). Sidoo kale dooran maaddada markaad ku shubtid khudaarta cagaaran, haddii aad go'aansato inaad ku kaydiso Maqsin.